သင်၏ယိုသောကင်ပိန်းကိုတရုတ်ရေဖြင့်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုမဖြစ်စေရ။ | Martech Zone
တနင်္လာနေ့မတ်လ 15, 2010 ဗုဒ္ဓဟူးနေ့, ဖေဖော်ဝါရီလ 9, 2022 Lorraine ဘောလုံး
ကျပန်းသူစိမ်းများကို Raving Fan များသို့ပြောင်းရွှေ့ရန်အထိရောက်ဆုံးနည်းတစ်ခုမှာ "ယိုမဲဆွယ်စည်းရုံးရေး" ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြစ်သည်။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်တွင်လူ ဦး ရေအလိုက်လူ ဦး ရေနှင့်ကိုက်ညီသော (သို့) ပိုကောင်းသောလူတစ်စုကိုသင်ခွဲခြားသတ်မှတ်သည်။ ဒီစာတွေကအီးမေးလ်ဖြစ်နိုင်တယ် အသံစာ, တိုက်ရိုက်မေးလ်သို့မဟုတ်မျက်နှာချင်းဆိုင်
အမှန်တကယ်ထိရောက်သောစည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးသည်သင့်ရည်မှန်းထားသောဖောက်သည်နှင့်သက်ဆိုင်သောသတင်းအချက်အလက်များကိုပုံမှန်ပေးသည်၊ သို့သော်စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေသည့်ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲများမဟုတ်ဘဲ ၀ ယ်သူဆုံးဖြတ်ချက်ဆီသို့ ဦး တည်သွားစေသည်။
သို့သော်တစ်ခါတစ်ရံတွင်စိတ်အားထက်သန်သောစီးပွားရေးပိုင်ရှင်များသို့မဟုတ်စျေးကွက်သမားများကသတင်းအချက်အလက်အလွန်များလွန်းခြင်းသို့မဟုတ်မကြာခဏပေးပို့ခြင်းအားဖြင့်လုပ်ငန်းစဉ်ကိုအရှိန်မြှင့်ရန်ကြိုးစားသည်။ ရလဒ်? အတိအကျဆန့်ကျင်ဘက်တုန့်ပြန်ချက်မှာသင်၏အလားအလာသည် ၀ ယ်ရန်ပျက်ကွက်ရုံမျှမကသင့်ကိုအမြဲတမ်းသွားရန်ပြောပါသည်။
အီးမေးလ်စျေးကွက်သမားတစ်ယောက်အနေနဲ့များသောအားဖြင့်ငါတော်တော်စိတ်ရှည်တတ်တယ်၊ ဒါပေမယ့်မကြာသေးခင်က Ratepoint ကသူတို့ကိုကြိုဆိုပါတယ်။ ဘယ်လိုလဲ? ကောင်းပြီ၊ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းကဒ်ပြားတစ်ခု၊ အီးမေးလ်တစ်စောင်၊ ထိုအခါငါအနည်းငယ်မေးခွန်းတွေမေးသောကာလအတွင်းဖုန်းခေါ်ခဲ့သည်။ စကားပြောဆိုမှုမပြီးဆုံးမီကျွန်ုပ်သည်၎င်းတို့သည်ပြန်လည်ရောင်းချသူများဖြစ်သည့်အတွက်သူတို့၏ထုတ်ကုန်ကိုအသုံးမပြုနိုင်ဟုသူတို့အားပြောကြားခဲ့သည် စဉ်ဆက်မပြတ်ဆက်သွယ်ပါ သူတို့ကကျွန်တော့်ကိုပြောင်းလဲဖို့တွန်းအားမဖြစ်စေခဲ့ဘူး။
သူတို့ကယဉ်ကျေးသိမ်မွေ့တဲ့အဖြေကိုယူမယ့်အစားငါ့ကိုလုံးဝကွဲပြားတဲ့အုပ်စုတစ်စုအဖြစ်ပြောင်းစေခဲ့တယ်။ ပို့စကတ်များ၊ အီးမေးလ်ပိုများများနှင့်ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုများပိုမိုများပြားလာသည်။ သူတို့ရဲ့အရောင်း ၀ ယ်သူတွေစိတ်ပျက်လက်ပျက်ဖြစ်လာတာနဲ့အမျှကျွန်မရဲ့ရုံးတင်စစ်ဆေးမှုကိုဘာကြောင့်မတက်ခဲ့တာလဲဆိုတာကိုသိဖို့တောင်းဆိုလာတဲ့အခါယဉ်ကျေးစွာနေဖို့ပိုခက်လာတယ်။ (နင်နယူးယော့ခ်ကပါ။ ကောင်းတဲ့နေ့တစ်နေ့မှာငါကယဉ်ကျေးစွာနေဖို့ခက်တယ်
အကယ်၍ ကျွန်ုပ်သည်သူတို့၏ကုန်ပစ္စည်းကိုကြိုးစားရန်စဉ်းစားခဲ့မည်ဆိုပါကကျွန်ုပ်သည်ယခုအချိန်တွင်မဖြစ်နိုင်ပါ။ သင်ခန်းစာ? အလွန်အကျွံစျေးကွက်ရှာဖွေရေးကောင်းတစ် ဦး အရာမဟုတ်ပါဘူး။ အကယ်၍ တစ်စုံတစ် ဦး က၎င်းတို့သည်အလားအလာမရှိကြောင်းဖော်ပြပါက၎င်းတို့ကိုရွေးချယ်ခွင့်ပြုပါ။ တစ်ချိန်တည်းမှာရေသည်တောင်များကိုတိုက်စားနိုင်သော်လည်းတစ်စုံတစ် ဦး သည်ဝယ်ယူရန်မလှုပ်နိုင်ပါ။
မတ်လ 15, 2010 မှာ 7: 29 AM
လော်ရိန်း၊ မင်းရဲ့ပို့စ်က မကြာသေးခင်က ငါတွေးနေတဲ့မေးခွန်းကို တွေးစေတယ်။ အီးမေးလ် DRIP ကမ်ပိန်းအတွက် အသုံးပြုရန် ကောင်းမွန်သော ကြားကာလ (မက်ဆေ့ချ်များကြား) သည် အဘယ်နည်း။ အထူးသဖြင့် သင့်တွင် ပေးဆောင်ရန် ပညာရေးဆိုင်ရာ အချက်အလက်များစွာ ရှိသည်။2ရက်? ၃ ရက်လား? တစ်ပါတ်?
မတ်လ 15, 2010 မှာ 8: 30 pm တွင်
ပုံမှန်အားဖြင့် ကျွန်ုပ်သည် တစ်ပတ်အတွင်း ထွက်ခွာလိုသော်လည်း ၎င်းသည် အမျိုးအစားအလိုက်နှင့် သင့်အသုံးပြုသူများ အကောင့်ဖွင့်ထားသည်ကို ကွဲပြားသည်။
ပိုမိုကောင်းမွန်သော ဘလော့ဂ်ရေးခြင်းအတွက် အကောင်းဆုံး ဥပမာမှာ ProBlogger 31 ရက်ဖြစ်သည်။ အစီအစဉ်ကောင်းတစ်ခု ဖြစ်ခဲ့သည်။ တစ်ရက်ကို 31 ရက်စာ အီးမေးလ်ရတော့မယ်မှန်းသိလို့ စာရင်းသွင်းလိုက်တယ်။ နည်းနည်းတော့ များလွန်းတယ်။ ကျွန်တော် နောက်ကျသွားပြီး ဘယ်တော့မှ နောက်ပြန်မဆုတ်ဘူး။ အီးမေးလ် ၃၁ စောင်လုံးကို သိမ်းဆည်းထားပေမယ့် သင်ခန်းစာ ၁၅ ကို မအောင်မြင်ခဲ့ပါဘူး။
သူ့ပရိုဂရမ်ကို ဖြတ်သန်းပြီးနောက် စာဖတ်သူတွေကို အချိန်ပိုပေးဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ အထွေထွေအပ်ဒိတ်များ၊ ဆွေးနွေးပွဲများသို့ ဖိတ်ခေါ်မှုများတွင်၊ အတင်းကျပ်ဆုံး နယ်ပယ်မှလွဲ၍ အားလုံးအတွက် နှစ်ပတ်လျှင် တစ်ခုထက်ပို၍ ပေးပို့ပါက အမှန်တကယ် ကျဆင်းသွားသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။
သူများတွေ သူတို့အတွက် ဘယ်လို အလုပ်ဖြစ်လဲ သိချင်နေလိမ့်မယ်။